Ny fihenan'ny gazety | Martech Zone
Ny fihenan'ny gazety
Alatsinainy Desambra 10, 2012 Douglas Karr
Ny olona sasany ao amin'ny sehatry ny gazety dia maniry anao hisaona azy ireo. Na dia mbola tiako aza ny fofon'ny fanaovana gazety sy tiako ny fanaovan-gazety matihanina, ity indostria ity dia isaorako mandrakizay noho izy nahazo ny boot. Tsy hitohy intsony ny momba izany… ireo lahatsoratro teo aloha Eto, Eto, Eto ary Eto manarona tsara!
Na eo aza ny fivoaran'ny fotoana sy ny fivoaran'ny teknolojia, ny orinasan-gazety nanjakazaka taloha dia toa resin'ny resa-be manerantany, ny internet. Miaraka amin'ny fahatratrarany manerantany, mora ny fahazoana miditra sy malaza amin'ny tanora mahay teknolojia, dia nihena be ny fivezivezena sy ny fandaniana amin'ny doka, nametraka ny fanontaniana hoe "Misy ho avy ve ny gazety?" Avy amin'ny Infographic: Ny fihenan'ny gazety
Tags: fizarana gazetygazety infographicgazety
Tokony hivarotra teny lakile raha tsy misy volan'ny fikarohana?
Fomba ahoana no mahatonga ny fiovam-po amin'ny varotra